Jean Nirina HAFARI Hanampy amin’ny fiarovana ny zon’ny voafonja
Taorian’ny fidirany am-ponja in-telo miantoana dia tapa-kevitra ny filoha nasionalin’ny Hafari Malagasy Rafanomezantsoa Jean Nirina fa hamindra amin’olon-kafa ny fitantanana ny resaka zon’olombelona eo anivon’ny fikambanana tarihiny.
Hirotsaka an-tsehatra amin’ny fanampiana sy fiarovana ny zon’ny voafonja kosa ny tenany ankoatra ny fananganana tanàna vaovao efa nahafantarana azy hatramin’izay ary ny angovo azo havaozina sy ny fampiroboroboana ny fampananan’asa. Samy tafiditra ao anatin’ny tetikasan’ny fitondram-panjakana avokoa ireo raha ny nambarany ka ny tanjona dia ny hananantsika firenena mandroso. Mikasika ny zon’ny voafonja manokana dia nomarihiny fa tsy izay rehetra mifonja akory dia olo-meloka avokoa ka tokony hampijaliana. Manana ny zony izy ireny raha toy ny fipetrahana amin’ny trano ara-dalàna sy madio, ny zo hisakafo sy hotsaboina raha marary, ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana ary ny fanafoanana ireo mpisoloky maka ny volan’ireo olona notoriana. Handrafitra volavolan-dalàna mifandraika amin’izany ny fikambanana Hafari Malagasy ary hatolony ny fitondram-panjakana.